Amanqaku eMilambo iPearce Martech Zone |
Amanqaku ngu Imilambo iPearce
UMlambo nguMlawuli weNtengiso we I-BoomTown, iqonga lokuthengisa izindlu nomhlaba kwi-Intanethi eliseCharleston, SC. Imilambo inamava angaphezulu kweminyaka eli-9 kwintengiso ekwi-intanethi nakwindawo yentengiso, isebenza neenkampani ezininzi zeFortune 500 kuyo yonke i-e-commerce, uhambo kunye neendawo zokuthengisa izindlu nomhlaba.
Igqitywa njani i-BoomTown Stack yayo yeMartech ngobuNgcali bokutsalela umnxeba
NgoLwesibini, Novemba 8, 2016 NgoLwesibini, Novemba 8, 2016 Imilambo iPearce
Incoko, ngakumbi umnxeba, iyaqhubeka nokuba phakathi kweyona ndlela isebenzayo yokunxibelelana nabantu nokubenza abathengi abathembekileyo. Ii-Smartphones zivale umsantsa phakathi kokukhangela kwi-Intanethi nokwenza iifowuni- kwaye xa kufikwa kuthengiso oluntsonkothileyo, lwexabiso eliphezulu, abantu bafuna ukungena emnxebeni kwaye bathethe nomntu. Namhlanje, itekhnoloji iyafumaneka ukongeza ukuqonda kwezi fowuni, ke abathengisi banokwenza izigqibo ezifanayo eziqhutywa ziidatha